ရင်သားကင်ဆာကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုမြတ်ဝင်း - The Lifestyle Myanmar
Home Health ရင်သားကင်ဆာ ကုသပျောက်ကင်းတာ ၁၀နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုမြတ်ဝင်း
၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် မုဒုံမြို့နေ အသက် ၃၇နှစ်အရွယ် ဒေါ်စုမြတ်ဝင်း၏ ဘယ်ဘက်ရင်သားရှိ အကျိတ်ကကြီးပြီး နာကျင်လာခဲ့သည်။ “ဖြစ်နေတာတော့ကြာပြီ။ ဒါပေမဲ့ မပြဖြစ်ခဲ့ဘူး။ အကျိတ်က ရှိတာလေးငါးနှစ်လောက်တောင် ရှိနေတာ။ အဲဒီရက်တွေမှာ အဘွားနေမကောင်းဖြစ်တော့ ညဘက်အိပ်ရေးတွေပျက်တယ်။ အဲဒီမှာစပြီး အကျိတ်က တော်တော်ကြီးလာတဲ့အပြင် နည်းနည်းကိုက်သလို ဖြစ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ရန်ကုန်၊ ဗဟိုစည်ဆေးရုံက ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ ပြလိုက်တယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ခွဲရမယ်ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်း ဘယ်ဘက်ရင်သားတစ်ခုလုံး ခွဲထုတ်လိုက်တယ်။ အသားစယူစစ်ဆေးလိုက်တော့ ကင်ဆာအဆင့်(၂)လို့ အဖြေထွက်ခဲ့ပါတယ်”ဟုဒေါ်စုမြတ်ဝင်းကဆိုသည်။
ဗဟိုစည်ဆေးရုံတွင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးထွန်းဦးနှင့် ဘယ်ဘက်ရင်သားကို ခွဲစိတ်မှု ခံယူခဲ့ပြီးနောက် ရင်သားကင်ဆာ အဆင့်(၂)ဟု သိသိချင်း ဒေါ်စုမြတ်ဝင်းသည် ကင်ဆာဆေးသွင်းကုထုံးကို ချက်ချင်းခံယူခဲ့သည်။ “ကင်ဆာဆေးကို အလုံက သူရိန်ဆေးခန်းမှာ ၁၂ ကြိမ်သွင်းရပါတယ်။ ဆေးသွင်းတဲ့ တစ်ရက်ပဲ အစားအသောက် ပျက်ပါတယ်။ နောက်နေ့တွေကျတော့ ကျွန်မနေကောင်းနေပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ဆေးသွင်းတဲ့ လေးရက်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ မုဒုံကိုပြန်တယ်။ အိမ်ရောက်မှ နားတယ်။ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ထွေထွေထူးထူး ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဆေးသွင်းတဲ့ ကာလတစ်ချိန်နဲ့ တစ်ချိန်ကြား ဆေးစစ်ရတာတွေကိုလည်း ပြုလုပ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကုန်လုံးကို အေးအေးဆေးဆေးဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကင်ဆာဆေးသွင်းတုန်းက ၀က်သား၊ အမဲသားတော့မစားပါဘူး။ ကြက်သား၊ ငါး၊ အသီးအရွက် စသဖြင့် အစားအသောက်ကို အကုန်စားပါတယ်”
ကင်ဆာဆေးသွင်းကုထုံး ၁၂ ကြိမ်ကို ခန္ဓာကိုယ်ပုံမပျက် ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ ဘာသာတရားကြောင့်ဟု ဒေါ်စုမြတ်ဝင်းက ထင်မြင်ထားသည်။ “ကျွန်မက တရားစခန်းတွေ ၀င်တဲ့အခါဝင်တယ်။ ဘုရား၊ တရားများများလုပ်တယ်၊ တရားစာတွေရွတ်တယ်၊ အလှူအတန်းတွေကိုလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်လုပ်တယ်။ ဒါတွေကြောင့်များ ကျွန်မခံနိုင်ရည်ရှိသလား မပြောတတ်ပါဘူး။ သူများတွေနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ကျွန်မပုံက လူနာပုံမပေါက်ခဲ့ပါဘူး . . ကင်ဆာဆေးသွင်းပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ၀တောင်ဝလာသေးတယ်”ဟု ဒေါ်စုမြတ်ဝင်းက ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ပြောပြခဲ့သည်။
ကင်ဆာဆေးသွင်းကုထုံးပြီးနောက် Tamoxifen ဆေးကို ငါးနှစ်သောက်ရကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် ကင်ဆာကုထုံး၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည့် အသည်းအဆီဖုံးခြင်းအတွက် သမားတော်ကြီး ပါမောက္ခဦးနေ၀င်းနှင့် ဆက်လက်စစ်ဆေးကုသမှု ခံယူရကြောင်း ဒေါ်စုမြတ်ဝင်းကပြောသည်။ အပျိုကြီးဖြစ်သော ဒေါ်စုမြတ်ဝင်း၏ ကင်ဆာကုသမှု ခရီးလမ်းတွင် မိဘဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းများ၊ မောင်နှမများ၏ အားပေးကူညီစောင့်ရှောက်မှုကိုသာမက မုဒုံမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တွင် အကြီးတန်းစာရေးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဒေါ်စုမြတ်ဝင်းအတွက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ နားလည်စာနာ ကူညီအားပေးမှုကိုလည်း အပြည့်အ၀ရရှိခဲ့သည်။
“ကျွန်မကင်ဆာကုနေတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်မပျက်ရဘူး၊ ခွင့်မယူရဘူး စသဖြင့် အထက်လူကြီးတွေက လုံးဝမပြောဘူး။ အစည်းအဝေးတက်စရာရှိရင် တက်ပေးတယ်၊ အရေးကြီးကိစ္စရှိရင် တက်ပေးတယ်၊ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ နားလည်မှုနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ကျွန်မကလည်းဆေးသွင်းဖို့ ရန်ကုန်တက်တဲ့ရက်ပဲ ခွင့်ယူရတယ်။ ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာ ပုံမှန်ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်” ဟု ဒေါ်စုမြတ်ဝင်းက ပြောသည်။
ဒေါ်စုမြတ်ဝင်း ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ရခြင်းမှာ မျိုးရိုးကြောင့်ဟု ဆိုသည်။ “အဖေရဲ့ အစ်ကိုအစ်ကြီးဆုံး ဘကြီးကလည်း ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တယ်၊ အဖေရဲ့ အစ်မအကြီးဆုံး ကြီးကြီးကလည်း ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တယ်၊ အဖေနဲ့ အထက်အောက် ညီမဒေါ်လေးကလည်း ရင်သားကင်ဆာဖြစ်တယ် . . ဒေါ်လေးက အခုရန်ကုန်မှာ ဆေးကုနေဆဲပါ . . ဆေးသွင်းတာပြီးသွားပြီ၊ ဆေးသောက်နေပါတယ်။ ကင်ဆာမျိုးရိုးရှိတော့ အကျိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်တော့ပူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစချင်းဖြစ်တဲ့အကျိတ်က သေးပြီး ဘာလက္ခဏာမှမပြတော့ စိုးရိမ်စရာမလိုဘူး ထင်ခဲ့တာ၊ အကျိတ်ကကြီးပြီး ကိုက်လာတော့ ချက်ချင်းပဲသွားပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ဒေါ်ဆုမြတ်ဝင်းက ပြောပြခဲ့သည်။
“ကင်ဆာလို့ သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ချက်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တယ်။ စိတ်ဓာတ်လည်း ကျသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်လာမှတော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ၊ ဆေးကုရမှာပေါ့လို့ အားတင်းလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆေးသွင်း၊ ဆေးသောက်လုပ်တော့လည်း ပြီးသွားတာပါပဲ။ သိပ်လည်း ခံစားမနေတော့ပါဘူး။ တရားနဲ့ပဲဖြေလိုက်ပါတယ်။ “ဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တယ်”လို့ တွေးလိုက်ပါတယ်”ဟု ဒေါ်ဆုမြတ်ဝင်းက ကင်ဆာဟု သိသိချင်းစိတ်အားတင်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ပုံကို ပြောပြခဲ့သည်။
ကင်ဆာကုသမှုပြီးဆုံးချိန်တွင် ဒေါ်စုမြတ်ဝင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအသောက်များကို တတ်နိုင်သမျှ စားသောက်လေ့ရှိကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။ “အစားအသောက်ကတော့ ပုံမှန်ပဲစားသောက်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သူများတွေ အသုပ်တွေ ဘာတွေစားတဲ့အခါ သန့်ရှင်းတယ်ဆိုရင် စားလိုက်တာပါပဲ။ ရောဂါကိုမေ့ထားပြီး သာမန်လူကောင်းတွေ နေထိုင်စားသောက်သလိုပဲ နေထိုင်စားသောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှလည်း မဖြစ်တော့ဘူးလေ . .ဒါပေမဲ့ သူများနဲ့စာရင်တော့ အပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူး။ ဒါကိုတော့ နည်းနည်းဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ဒီတော့လည်း နေကောင်းနေပါတယ်။
မုဒုံမှာ သင်္ကြန်ဆိုရင် ကျွန်မ တရားစခန်းဝင်ပါတယ်။ အိမ်မှာလည်း ဘုရားရှိခိုးတယ်၊ ပဌာန်းစေတီတည်တယ်၊ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ တရားတွေကိုနာတယ်၊ တရားမှတ်တယ်၊ ဒီလိုနဲ့ စိတ်ခွန်အားရလာတယ်။ အလှူအတန်းတွေကို တတ်နိုင်သမျှလုပ်တယ်။ လှူတာကို ကြုံတဲ့နေရာတွေမှာ အဆင်ပြေရင်ပြေသလို လှူပါတယ်။ နိုင်သလောက် ကုသိုလ်တရားတွေ လုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်”
ယခုအခါ မုဒုံမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တွင် ဒုဦးစီးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဒေါ်စုမြတ်ဝင်းသည် မိသားစုနှင့်အတူ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အခြားကင်ဆာဝေဒနာရှင်များ၊ ကင်ဆာကုသမှု ခံယူနေသူများသို့-
“ကင်ဆာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ ခံစားနေလို့လည်း မထူးဘူးလေ၊ ကျွန်မကတော့ မြောက်ဦးဆရာတော်ရဲ့ ထိုင်တရားနာတယ်၊ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ရဲ့ တရားတွေနာတယ် . . ဒီလိုနဲ့ အာရုံတွေ မပျံ့လွင့်တော့ဘူး၊ စိတ်သက်သာရာရတယ်။ ရောဂါကိုတောင် သတိမထားမိတော့ဘူး . . ဒီလိုနဲ့ပဲ ကင်ဆာကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် တခြား ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေလည်း အားမငယ်ကြပါနဲ့ . . ကိုယ်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားလေးတွေ၊ တတ်နိုင်သလောက် အလှူအတန်းလေးတွေ လုပ်ရင်းနဲ့ ကင်ဆာကုသမှုကို အေးအေးဆေးဆေး ကျော်လွှားနိုင်မှာပါ”ဟု ဒေါ်စုမြတ်ဝင်းက သူ့အတွေ့အကြုံကို အခြေခံလျက် အခြားကင်ဆာဝေဒနာရှင်များကို အားပေးစကား ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
၂၀၀၇ ခုနှဈ ဇူလိုငျလတှငျ မုဒုံမွို့နေ အသကျ ၃၇နှဈအရှယျ ဒျေါစုမွတျဝငျး၏ ဘယျဘကျရငျသားရှိ အကြိတျကကွီးပွီး နာကငျြလာခဲ့သညျ။ “ဖွဈနတောတော့ကွာပွီ။ ဒါပမေဲ့ မပွဖွဈခဲ့ဘူး။ အကြိတျက ရှိတာလေးငါးနှဈလောကျတောငျ ရှိနတော။ အဲဒီရကျတှမှော အဘှားနမေကောငျးဖွဈတော့ ညဘကျအိပျရေးတှပေကျြတယျ။ အဲဒီမှာစပွီး အကြိတျက တျောတျောကွီးလာတဲ့အပွငျ နညျးနညျးကိုကျသလို ဖွဈလာတယျ။ ဒါနဲ့ ရနျကုနျ၊ ဗဟိုစညျဆေးရုံက ခှဲစိတျဆရာဝနျနဲ့ ပွလိုကျတယျ။ ခှဲစိတျဆရာဝနျက ခှဲရမယျဆိုတာနဲ့ ခကျြခငျြး ဘယျဘကျရငျသားတဈခုလုံး ခှဲထုတျလိုကျတယျ။ အသားစယူစဈဆေးလိုကျတော့ ကငျဆာအဆငျ့(၂)လို့ အဖွထှေကျခဲ့ပါတယျ”ဟုဒျေါစုမွတျဝငျးကဆိုသညျ။
ဗဟိုစညျဆေးရုံတှငျ ခှဲစိတျဆရာဝနျကွီး ပါမောက်ခဦးထှနျးဦးနှငျ့ ဘယျဘကျရငျသားကို ခှဲစိတျမှု ခံယူခဲ့ပွီးနောကျ ရငျသားကငျဆာ အဆငျ့(၂)ဟု သိသိခငျြး ဒျေါစုမွတျဝငျးသညျ ကငျဆာဆေးသှငျးကုထုံးကို ခကျြခငျြးခံယူခဲ့သညျ။ “ကငျဆာဆေးကို အလုံက သူရိနျဆေးခနျးမှာ ၁၂ ကွိမျသှငျးရပါတယျ။ ဆေးသှငျးတဲ့ တဈရကျပဲ အစားအသောကျ ပကျြပါတယျ။ နောကျနတှေ့ကေတြော့ ကြှနျမနကေောငျးနပေါတယျ။ တဈခါတလေ ဆေးသှငျးတဲ့ လေးရကျပွညျ့ပွီဆိုတာနဲ့ မုဒုံကိုပွနျတယျ။ အိမျရောကျမှ နားတယျ။ ခံနိုငျရညျရှိပါတယျ။ ထှထှေထေူးထူး ဘာမှမဖွဈပါဘူး။ ဆေးသှငျးတဲ့ ကာလတဈခြိနျနဲ့ တဈခြိနျကွား ဆေးစဈရတာတှကေိုလညျး ပွုလုပျရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အကုနျလုံးကို အေးအေးဆေးဆေးဖွတျကြျောနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကငျဆာဆေးသှငျးတုနျးက ဝကျသား၊ အမဲသားတော့မစားပါဘူး။ ကွကျသား၊ ငါး၊ အသီးအရှကျ စသဖွငျ့ အစားအသောကျကို အကုနျစားပါတယျ”
ကငျဆာဆေးသှငျးကုထုံး ၁၂ ကွိမျကို ခန်ဓာကိုယျပုံမပကျြ ကြျောလှားနိုငျခဲ့ခွငျးမှာ ဘာသာတရားကွောငျ့ဟု ဒျေါစုမွတျဝငျးက ထငျမွငျထားသညျ။ “ကြှနျမက တရားစခနျးတှေ ဝငျတဲ့အခါဝငျတယျ။ ဘုရား၊ တရားမြားမြားလုပျတယျ၊ တရားစာတှရှေတျတယျ၊ အလှူအတနျးတှကေိုလညျး ကိုယျတတျနိုငျသလောကျလုပျတယျ။ ဒါတှကွေောငျ့မြား ကြှနျမခံနိုငျရညျရှိသလား မပွောတတျပါဘူး။ သူမြားတှနေဲ့ယှဉျရငျတော့ ကြှနျမပုံက လူနာပုံမပေါကျခဲ့ပါဘူး . . ကငျဆာဆေးသှငျးပွီး နောကျပိုငျးမှာ ဝတောငျဝလာသေးတယျ”ဟု ဒျေါစုမွတျဝငျးက ပွုံးပွုံးရှငျရှငျ ပွောပွခဲ့သညျ။
ကငျဆာဆေးသှငျးကုထုံးပွီးနောကျ Tamoxifen ဆေးကို ငါးနှဈသောကျရကွောငျး၊ နောကျပိုငျးတှငျ ကငျဆာကုထုံး၏ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတဈခုဖွဈသညျ့ အသညျးအဆီဖုံးခွငျးအတှကျ သမားတျောကွီး ပါမောက်ခဦးနဝေငျးနှငျ့ ဆကျလကျစဈဆေးကုသမှု ခံယူရကွောငျး ဒျေါစုမွတျဝငျးကပွောသညျ။ အပြိုကွီးဖွဈသော ဒျေါစုမွတျဝငျး၏ ကငျဆာကုသမှု ခရီးလမျးတှငျ မိဘဆှမြေိုးအပေါငျးအသငျးမြား၊ မောငျနှမမြား၏ အားပေးကူညီစောငျ့ရှောကျမှုကိုသာမက မုဒုံမွို့နယျ စညျပငျသာယာရေးအဖှဲ့တှငျ အကွီးတနျးစာရေးအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျနသေူ ဒျေါစုမွတျဝငျးအတှကျ လုပျဖျောကိုငျဖကျမြား၏ နားလညျစာနာ ကူညီအားပေးမှုကိုလညျး အပွညျ့အဝရရှိခဲ့သညျ။
“ကြှနျမကငျဆာကုနတေဲ့အခြိနျမှာ အလုပျမပကျြရဘူး၊ ခှငျ့မယူရဘူး စသဖွငျ့ အထကျလူကွီးတှကေ လုံးဝမပွောဘူး။ အစညျးအဝေးတကျစရာရှိရငျ တကျပေးတယျ၊ အရေးကွီးကိစ်စရှိရငျ တကျပေးတယျ၊ ကနျြတဲ့အခြိနျတှမှော နားလညျမှုနဲ့ပဲ အလုပျလုပျရတယျ။ ကြှနျမကလညျးဆေးသှငျးဖို့ ရနျကုနျတကျတဲ့ရကျပဲ ခှငျ့ယူရတယျ။ ကနျြတဲ့ရကျတှမှော ပုံမှနျပွနျလုပျနိုငျပါတယျ” ဟု ဒျေါစုမွတျဝငျးက ပွောသညျ။
ဒျေါစုမွတျဝငျး ရငျသားကငျဆာဖွဈရခွငျးမှာ မြိုးရိုးကွောငျ့ဟု ဆိုသညျ။ “အဖရေဲ့ အဈကိုအဈကွီးဆုံး ဘကွီးကလညျး ရငျသားကငျဆာဖွဈတယျ၊ အဖရေဲ့ အဈမအကွီးဆုံး ကွီးကွီးကလညျး ရငျသားကငျဆာဖွဈတယျ၊ အဖနေဲ့ အထကျအောကျ ညီမဒျေါလေးကလညျး ရငျသားကငျဆာဖွဈတယျ . . ဒျေါလေးက အခုရနျကုနျမှာ ဆေးကုနဆေဲပါ . . ဆေးသှငျးတာပွီးသှားပွီ၊ ဆေးသောကျနပေါတယျ။ ကငျဆာမြိုးရိုးရှိတော့ အကြိတျဖွဈတဲ့အတှကျ စိတျတော့ပူပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စစခငျြးဖွဈတဲ့အကြိတျက သေးပွီး ဘာလက်ခဏာမှမပွတော့ စိုးရိမျစရာမလိုဘူး ထငျခဲ့တာ၊ အကြိတျကကွီးပွီး ကိုကျလာတော့ ခကျြခငျြးပဲသှားပွဖွဈခဲ့ပါတယျ” ဟု ဒျေါဆုမွတျဝငျးက ပွောပွခဲ့သညျ။
“ကငျဆာလို့ သိလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ တဈခကျြတော့ စိတျမကောငျးဖွဈလိုကျတယျ။ စိတျဓာတျလညျး ကသြှားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဖွဈလာမှတော့ ဘာတတျနိုငျမှာလဲ၊ ဆေးကုရမှာပေါ့လို့ အားတငျးလိုကျတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ဆေးသှငျး၊ ဆေးသောကျလုပျတော့လညျး ပွီးသှားတာပါပဲ။ သိပျလညျး ခံစားမနတေော့ပါဘူး။ တရားနဲ့ပဲဖွလေိုကျပါတယျ။ “ဖွဈခြိနျတနျလို့ဖွဈတယျ”လို့ တှေးလိုကျပါတယျ”ဟု ဒျေါဆုမွတျဝငျးက ကငျဆာဟု သိသိခငျြးစိတျအားတငျး ရငျဆိုငျခဲ့ပုံကို ပွောပွခဲ့သညျ။
ကငျဆာကုသမှုပွီးဆုံးခြိနျတှငျ ဒျေါစုမွတျဝငျးသညျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျသော အစားအသောကျမြားကို တတျနိုငျသမြှ စားသောကျလရှေိ့ကွောငျး ပွောပွခဲ့သညျ။ “အစားအသောကျကတော့ ပုံမှနျပဲစားသောကျပါတယျ။ တဈခါတလေ သူမြားတှေ အသုပျတှေ ဘာတှစေားတဲ့အခါ သနျ့ရှငျးတယျဆိုရငျ စားလိုကျတာပါပဲ။ ရောဂါကိုမထေ့ားပွီး သာမနျလူကောငျးတှေ နထေိုငျစားသောကျသလိုပဲ နထေိုငျစားသောကျဖွဈပါတယျ။ ဘာမှလညျး မဖွဈတော့ဘူးလေ . .ဒါပမေဲ့ သူမြားနဲ့စာရငျတော့ အပငျပနျးမခံနိုငျဘူး။ ဒါကိုတော့ နညျးနညျးဂရုစိုကျရပါတယျ။ ဒီတော့လညျး နကေောငျးနပေါတယျ။
မုဒုံမှာ သွင်ျကနျဆိုရငျ ကြှနျမ တရားစခနျးဝငျပါတယျ။ အိမျမှာလညျး ဘုရားရှိခိုးတယျ၊ ပဌာနျးစတေီတညျတယျ၊ ဆရာတျောဘုရားကွီးတှရေဲ့ တရားတှကေိုနာတယျ၊ တရားမှတျတယျ၊ ဒီလိုနဲ့ စိတျခှနျအားရလာတယျ။ အလှူအတနျးတှကေို တတျနိုငျသမြှလုပျတယျ။ လှူတာကို ကွုံတဲ့နရောတှမှော အဆငျပွရေငျပွသေလို လှူပါတယျ။ နိုငျသလောကျ ကုသိုလျတရားတှေ လုပျဆောငျဖွဈပါတယျ”
ယခုအခါ မုဒုံမွို့နယျ စညျပငျသာယာရေးအဖှဲ့တှငျ ဒုဦးစီးမှူးအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျလကျြရှိသော ဒျေါစုမွတျဝငျးသညျ မိသားစုနှငျ့အတူ ကနျြးမာပြျောရှငျစှာ နထေိုငျလကျြရှိပါသညျ။ သို့ဖွဈရာ အခွားကငျဆာဝဒေနာရှငျမြား၊ ကငျဆာကုသမှု ခံယူနသေူမြားသို့-
“ကငျဆာဖွဈလာပွီဆိုတော့ ဘာတတျနိုငျမှာလဲ။ ဖွဈတဲ့အပျေါမှာ ခံစားနလေို့လညျး မထူးဘူးလေ၊ ကြှနျမကတော့ မွောကျဦးဆရာတျောရဲ့ ထိုငျတရားနာတယျ၊ ပါမောက်ခခြုပျဆရာတျောရဲ့ တရားတှနောတယျ . . ဒီလိုနဲ့ အာရုံတှေ မပြံ့လှငျ့တော့ဘူး၊ စိတျသကျသာရာရတယျ။ ရောဂါကိုတောငျ သတိမထားမိတော့ဘူး . . ဒီလိုနဲ့ပဲ ကငျဆာကို ကြျောလှားနိုငျခဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့ တခွား ကငျဆာဝဒေနာရှငျတှလေညျး အားမငယျကွပါနဲ့ . . ကိုယျကိုးကှယျရာ ဘာသာတရားလေးတှေ၊ တတျနိုငျသလောကျ အလှူအတနျးလေးတှေ လုပျရငျးနဲ့ ကငျဆာကုသမှုကို အေးအေးဆေးဆေး ကြျောလှားနိုငျမှာပါ”ဟု ဒျေါစုမွတျဝငျးက သူ့အတှအေ့ကွုံကို အခွခေံလကျြ အခွားကငျဆာဝဒေနာရှငျမြားကို အားပေးစကား ပွောကွားလိုကျပါသညျ။
Next articleအုပ်စုခေါင်းဆောင်နဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်